अति गरीबको सूचीमा पूर्वमन्त्रीलगायत हुने-खानेहरु, ठगिनेकै विरुद्ध विप्लव कार्यकर्ताको प्रयोग (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, ३० असोज । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज २८९ औं एपिसोड हो । आजको यस विशेष एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
आजको एपसोडमा निम्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ :
१. बाजुरामा हुने खानेको नाम पनि अति विपन्नमा दर्ता, पूर्वमन्त्रीसमेत गरिब !
२. विप्लप माओवादीको कार्यकर्ता हुँ भन्ने एलपी बुढाथोकी को हुन् ?
काठमाडौं, ३० असोज । हामीले कार्यक्रमको सुरुवात देखिनै दुवईमा भिजिट भिषामा लैजाने बाहानामा मानव तस्करी गर्ने गिरोहको बारेमा देखाउँदै आएका छाैं । लाइफ गार्डको लागि दुबई लैजाने भन्दै नयाँ बसपार्कमा रहेको ट्रष्ट ट्राभल एजेन्सीले ठगेको भन्दै सुर्खेतका मनोज गुरुङको बिषयमा रिपोर्टीङ गरेका थियौँ ।
यो विषय हामीले ट्राभल सञ्चालक महिलासँग समस्याको बारेमा कुरा गर्दा उल्टो आँफु विप्लप माओवादीको नेता भएको भन्दै अर्का व्यक्ति इश्वर बुढाथोकी बताउने एलपी बुढाथोकी बिचमा आएका थिए ।
३. दसैैको बेला पनि काम गरेको पैसा दिएन ठकेदारले !
उनि जाजरकोटका, १४ वर्षीय हरिचन्द्र विक । उमेरले श्रम गर्न बन्देज लगाएपनि परिवारको एक्लो छोरा भएपछि घरको अवस्थाले काम गर्न बाध्य बनायो । र अहिले काठमाडांै मुलपानिमा सडक निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।